Fanontaniana maro no mitambolina amin’ny setriny ataon’ny governemanta japoney amin’ny orambaratra, nahafaty olona an-jatony, tsy mbola nisy toy izany hatramin’izay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2018 8:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, नेपाली, English
Tondradrano ao Kurashiki, Okayama any Japan andrefana. Pikantsary avy amin'ny NHK World-Japan.
Farafahakeliny 178 ny isan'ny olona maty ary mihoatra ny 60 no tsy hita popoka taorian'ny orana mivatravatra, nijika indrindra voarakitra an-tantara, tao andrefan'i Japan.
Nahatratra an'i Honshu andrefana ny tondradrano, indrindra fa ny manodidina ny prefektioran'i Okayama sy Hiroshima. Raha mbola miady mafy amin'ny famonjena ireo mponina tafahitsoka sy hamerina ny tolotra toy ny fanomezan-drano ny manampahefana eny ifotony, dia mihabetsaka ny fanontaniana avy amin'ny Japoney hoe nahoana no niakatra avo dia avo toy izany ny isan'ny maty ary maninona no miadana dia miadana amin'ny famaliana ny voina ny governemanta foibe.
Efa nirotsaka nandritra ny andro maromaro izay ny orana izay nanamontsana ny rotsaka nisy hatramin'izay ao anatin'ny vanim-potoanan'ny orana ao Japan isan-taona raha mbola nanombana ny manampahefana misahana toetrandro ao Japan fa hoavy ny tondradrano be amin'ny alakamisy 5 jolay, indrindra fa any Japan andrefana.
Talohan'ny alakamisy mody masoandro dia efa nisy ny tatitra fa efa mihoatra ny 400 mm ny rotsak'orana tao anatin'ny 72 ora mahery any amin'ny faritra sasany, izany hoe efa indro avo heny amin'ny rotsak'orana isan-taona misy any. Nefa mbola be ny hoavy.
ny rotsak'orana tamin'ny 5 jolay any Japan andrefana. Pika: “Rotsak'orana mihoatra ny 72 ora… Ny faritr'i Tokyo irery ihany no tsy tratran'ity orana mampisy voina ity.” Pika avy amin'ny Fantsona YouTube ofisialin'ny ANN.
Tsy nitsahatra ny orana nandritra ny faran'ny herinandro. Sambany teo amin'ny tantara, namoaka fampitandremana fisian'ny tondra-drano amin'ny prefektiora valo (efa ho 11 izany) ao anatin'ny fotoana iray ny Sampan-draharaha Japoney misahana ny Toetrandro.
I Kurashiki, tanàna tsara kolokolo ho amin'ny fizahantany any Okayama, no niharan'ny tondradrano ratsy indrindra, fa efa manakaiky ny 30 isanjato amin'ny kaominina no tratra.
Oram-batravatra: Sary nalaina tamin'ny 8:51 maraina [tamin'ny asabotsy 7 jolay] any amin'ny manodidina an'i Yata, ao Makibi an-tanànan'i Kurashiki, Okayama. Tondraka hatreny amin'ny tafo ny trano.
Nahazo lohatenin-gazety amin'ny fisian'ny fihontsahan'ny tany maro dia maro izay nandevina olona velona am-polony i Hiroshima, prefektiora be tendrombohitra manakaiky an'i Okayama mankany andrefana, .
“Fa naninona aho no tsy nilaza azy hiala ny trano?” hoy ny fanontanian'ny mpanambady vao iray vao telo herinandro namoy ny vadiny tamin'ny fihontsahan'ny tany tao Hiroshima
Saika nahazo ny prefektiora rehetra ao Japan andrefan'ny tendrombohitra Fuji ny orana. Raha any amin'ny ilany atsinanana kosa misy ny fanahiana fa mety ho rava ny tohodrano iray, lasa mirohondrohona ahitana riandrano misasasasa sy ahiana hanafotra ny distrika afovoany amin'ny tanànan'i Kyoto ilay reniranon'i Kamo bonaika be manavatsava ny ilany andrefan'ny tanàna.
Tondraka ny reniranon'i Kamo.
Noho ny habetsaka sy hadadasiky ny rotsakorana, tondradrano ary fihotsahan'ny tany, dia sarotra ny mahita indray miaraka ny haavon'ny voina indray mitranga ao anatin'ny fotoana indray mandeha manerana an'i Japan andrefana. Nandritra ny faran'ny herinandro, nanangana fitaovana iray ifanrimbonana ilaina mampiasa Google Earth hamantarana ireo fotodrafitrasa rava manerana ny faritra i Hidenori Watanave, mpanao fikarohana amin'ny fanoritana an-tsarintany. Nilaza i Watanave fa tsy ho ela dia ho vonona an-tserasera ho azon'ny rehetra ampiasaina ilay fitaovana.
Araka ny efa nomarihana tamin'ny sioka teo aloha, lasa miseho ho toy ny bodofotsy amin'ny Google Earth ny [sarin'ny faritra rava].
Miakatra manoloana ny fahitana ny governemanta tsy rototra ny hatezerana
Nahazo anarana avy amin'ny sampandraharahan'ny toetrandro japoney (JMA) ireo fitambaram-boina ireo tamin'ny 9 jolay:
Famoham-baovao (9 Jolay 2018): Napetraky ny JMA tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny voina hoe “Oram-baratra Jolay 2018.”
Nanomboka nahazo tsikera noho ny tsy fandraisany andraikitra ny Praiminisitra Abe Shinzo sy ny kabinetrany.
Efa notondroin'ny tatitry ny famoaham-baovao ho anisan'ny krizy lehibe ity safodrano ity tamin'ny 5 jolay. Nandritra io andron'ny alakamisy io, nanatontosa lanonana an-takonana takariva iray tao Tokyo ry Abe sy ny mpikambana ambony ao amin'ny Antoko Liberaly Demaokratika, mankalaza sy miresaka ny ezaka ataon-dry zareo hiarovana tsara an'i Abe hahazo fehim-potoana fiasana fahatelo tsy mbola nisy mihitsy teo aloha amin'ny mahalohan'ny antoko sy maha-praiminisitr'i Japan azy.
Manondro 8:30 PM [ny alakamisy 5 Jolay] ny famataranandro. Amin'izao ora izao ve tsy tokony efa hita miharihary ny habetsaky ny fahasimbana?
Nandany andro maromaro hamelezana ny praiminisitra ireo famoahana toy ny gazety fironana havia Asahi sy ny gazety tia manaitaitra iray antsoina hoe Nikkan Gendai:
Avy amin'ny Nikkan Gendai, gazety mpanaitaitra iray:
[Lohateny avy amin'ny sary voalohany] “Raha mbola difotry ny rano ny vahoaka, inona moa izany no tena nataon'ity governemanta ity?”
[Lohateny sy dika avy amin'ny sary faharoa]: “Inona no tianao lazaina amin'ny hoe ‘ny ain'ny vahoaka aloha no voalohany?'”
“Mbola tany amin'ny lanonana fisotroana ry zareo, mamolavola ny teti-panorony ara-politika na mitsidika ireo mpiray dia amin-dry zareo, variana amin'ny famelomana ny fitantanam-panjakany. Tsy nataony ho laharam-pahamehana ny krizin'ny tondradrano fa nataony ambin-javatra, ka nanampy trotraka ny fahapotehana izany.”
“Tsy nanao na inona na inona ny Kabinetra mandra-pahatonga ny 7 Jolay” […]
Fanontaniana hoe nahoana no henjana be tahaka izao ny isan'ny olona maty sy ny fahapotehan-javatra
Niezaka ny Praiminisitra Abe hitsidika ireo faritra tratran'ny tondradrano tamin'ny alarobia 11 jolay, efa ho herinandro taorian'ny fahitana miharihary fa miatrika voina voajanahary goavana i Japana. Ankilan'ny isan'ny maty hita hihoatra ny 200, dia trano miisa 70.000 manerana an'i Japan andrefana no safotry ny rano ary olona 2 tapitrisa no tsy maintsy nesorina haingana hiala ny tranony.
Manasarotra ny fitondrana fanampiana ihany koa ny hatevin'ny fotaka, ny fahasimban'ny fotodrafitrasa itaterana sy ny fitohizan'ny mety hisian'ny fahavakisan'ny tohodrano, indrindra fa ny rano fisotro sy ny sakafo ho an'ireo nafindra toerana. Ny fiavosan'ny fako avy amin'ny trano rava no mahatery ny mpitondra eny ifotony amin'ny fiezahan-dry zareo mitady vahaolana amin'izay azo atao manoloana azy io.
Mihabetsaka ihany koa ny fanontanian'ny olona hoe nahoana moa, ao amin'ity firenena izay zatra oram-baratra tampoka ity, no lasa avo dia avo toy izao ny fahabetsahan'ny olona maty. Ao amin'ny prefektioran'i Okayama, izay nahitana ny fahabetsahan'olona maty avo indrindra nandritra ny herinandro lasa teo, dia nolazaina fa efa fantatra mialoha ny mety hisian'ny tondradrano.
Linda Sieg, mitati-baovao hoan'ny sampam-baovao Reuters, nanamarika fa ny antony iray dia noho ny tsy fahalalàn'ny olona izay aleha rehefa misy ny fanairana hiala amin'ny toerana. Eo ihany koa, fihovitrovitry ny tany no mahazatra an'i Japan fa tsy todra-drano goavana, raha hita fa maro amin'ny trano no naorina tamin'ny toerana mora isian'ny fihotsahan'ny tany noho ny tsy fahampian'ny tany hanorenam-ponenana.
Aty amin'ny farany, nanamarika ny gazety Mainichi, fa mety ho nanafotra ireo fefiloha enti-miaro amin'ny tondradrano misy amin'izao fotoana ny habetsaky ny rano.
Taorian'ny zava-mitranga, maro ihany koa ny fanotaniana lasa amin'ny nanampian'ny fikorontanan'ny toetrandro trotraka ny voina. Efa nolazaina mialoha fa hiteraka fahatetehana sy fitomboana vaika betsaka kokoa eo amin'ny toetrandro, toy ny oram-baventy, indrindra fa any andrefan'i Japana ny fiankarana ankapoben'ny hafanan'ny tany.
Raha nitatitra betsaka amin'ny fiavian'ny orana sy ny tondradrano ho tantara momba an'i Japan ny fampahalalam-baovao any amin'ny firenena tandrefana sy ireo firenena miteny anglisy, dia nanoritra kosa ny fantsona Japoney Kyodo fa iray amin'ireo zava-mitranga ara-toetrandro mitranga ao anatin'ny fotoana iray (mitovy) eto amin'izao tontolo izao ihany io voina io:
Nanambara ny Sampan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Toetrandro [Miorina ao Geneva] (WMO) tamin'ny 10 jolay fa, raha mizaka ny oram-batravatra i Japan ny volana jolay, dia ahitana ny hafanana ambony indrindra voarakitra ao Afrika Avaratra sy ny morontsiraka andrefan'i Amerika Avaratra, raha tsikaritra fa ahitana toetrandro tsy mahazatra azy avokoa ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Nanamarika ihany koa Nishinippon Shimbun, gazety lehibe iray mivoaka isan'andro any Fukuoka miely any andrefan'i Japan:
Raha niteraka fahasimbana goavana any Japan andrefana ny oram-batravatra nanamontsana ny rotsaka nisy hatramin'izany, dia namoahan'ny Sampandraharaha Japoney misahana ny toetrandro filazana fampitandremana ny prefektiora miisa 11, isam-pampitandremana betsaka indrindra indray miaraka hatramin'izay.
Raha nofariparitana ho ahazoana fampitandremana manokana ara-toetrandro “indray mandeha isaky ny 50 taona” ny orana sy ny tondradrano, taorian'ny orana sy ny tondradrano tamin'ny taona 2017, dia ity no fanindroany misesy nahazoan'ny prefektioran'i Fukuoka fampitandremana manokana.
Raha lasa mahazatra vaovao ny toetrandro tsy mahazatra, dia ahoana ny hiarovantsika ny tenantsika?